कर्णालीका स्थानीय तहमा पुरुष निर्णय हावी, निरीह महिला जनप्रतिनिधि | NewsKarobar
गृहपृष्ठ कर्णालीका स्थानीय तहमा पुरुष निर्णय हावी, निरीह महिला जनप्रतिनिधि
कर्णालीका स्थानीय तहमा पुरुष निर्णय हावी, निरीह महिला जनप्रतिनिधि
कर्मचारीहरुको मानसिकतामा समेत महिलाको निर्णय अमान्य !
नारामा महिला-पुरुष समान भनिए पनि नेपालमा भने व्यवहारिक रुपले अझै लागू भइसकेको छैन । जनताद्वारा निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिहरु त पुरुष हैकमको अगाडि निरीह बन्न बाध्य छन् भने सर्वसाधारण महिलाको अवस्था कस्तो होला ?
यसको ज्वलन्त उदाहरण कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहहरुमा देख्न पाइन्छ । कर्णालीका स्थानीय तहहरुमा महिला जनप्रतिनिधिको अधिकारमाथि पुरुष कर्मचारी र जनप्रतिनिधि हावी हुने गरेका छन् । योजना अनुगमनको क्रममा उपप्रमुखको निर्णयलाई वेवास्ता गर्दै आफुखुशी निर्णय हुने गरेको छ । अनुगमन समितिका सदस्य, प्रमुख र कर्मचारीहरुले समेत उपप्रमुखको निर्णयलाई वेवास्ता गर्छन् ।
सैद्धान्तिक रुपमा उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरु योजना अनुगमनको संयोजक रहे पनि पूर्ण रुपमा उनीहरुले अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । विभिन्न विकासे योजनाहरुको अनुगमन गरी उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरुले दिएको निर्देशनलाई समितिकै सदस्य तथा प्रमुखले समेत वेवास्ता गर्ने गरेको चंखेली गाउँपालिका, हुम्लाकी उपाध्यक्ष बिमलाकुमारी शाहीले बताइन् ।
प्रमुखको दबावका कारण कतिपय गुणस्तरहीन काम भएका योजनाहरुको पनि भुक्तानी दिनुपर्ने उनले सुनाइन् । ‘हामीले योजनाको अनुगमन गरी गुणस्तरीय काम नभएको अवस्थामा भुक्तानी रोक्न खोज्छौँ,’ उनले भनिन्, ‘तर प्रमुख र कर्मचारीहरुले भुक्तानी दिनुहुन्छ ।’ महिलाको निर्णयलाई मान्न प्रायः कोही पनि पुरुषहरु तयार नहुने उनले गुनासो गरिन् । ‘कतिपय निर्णयहरु मेरो अनुपस्थितिमा समेत भएका छन् । हामीलाई ‘नमूना’जस्तो मात्र ठानेको देख्दा संघीयताकै उपहास भएका अनुभूति हुन्छ,’ उनले भनिन् ।
‘कतिपय निर्णयहरु मेरो अनुपस्थितिमा समेत भएका छन् । हामीलाई ‘नमूना’जस्तो मात्र ठानेको देख्दा संघीयताकै उपहास भएका अनुभूति हुन्छ,’ उनले भनिन् ।
कपुरकोट गाउँपालिका, सल्यानकी उपाध्यक्ष तिला बुढाले आफूलाई आर्थिक अधिकार नहुँदा काम गर्न समस्या भएको बताइन् । ‘अन्य स्थानीय तहको अवस्था के छ मलाई खासै जानकारी छैन । मेरो गाउँपालिकामा भने प्रमुखले नै योजना निर्माणमा बढी भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘स्थानीयहरुको गाली खाँदै योजनाहरुको अनुगमन मैले गर्नुपर्छ तर आर्थिक निर्णयको अधिकार प्रमुखलाई मात्र छ ।’
आठबिस नगरपालिका, दैलेखकी उपप्रमुख दिपा बोहोराले योजना अनुगमन समितिकै सदस्यसमेत आफ्नो निर्णयमा एकमत नहुँदा समस्या पर्ने गरेको बताइन् । ‘मैले गुणस्तरीय काम नभएको योजनाहरुको भुक्तानी रोक्न निर्देशन दिएकी हुन्छु,’ बोहराले भनिन् ‘तर समितिका अन्य सदस्यहरुले मलाई जानकारी नै नदिई हस्ताक्षर गरिसकेका हुन्छन् ।’ कर्मचारीहरुको मानसिकतामा समेत महिलाको निर्णय अमान्य हुने उनले अनुभव गरेकी छन् ।
वडास्तरमा पनि महिलालाई उपस्थित मात्र गराउने तर अर्थपूर्ण सहभागी नगराई योजना निर्माण हुने गरेको उनले बताइन् । ‘वडामा ३ जना पुरुष र २ जना महिला सदस्य हुनुहुन्छ । तर योजना निर्माण गर्दासमेत महिला सदस्यसँग समन्वय नगरी पुरुष सदस्यहरुले एकलौटी गर्नुहुन्छ,’ उनले गुनासो सुनाइन् । योजना निर्माणका लागि कार्यपालिकासम्म आइपुग्दा ठूलै संघर्ष गर्नुपर्ने उनको अनुभव छ ।
त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका, डोल्पाकी उपप्रमुख चन्द्राकुमारी बुढाले पनि हरेक कुरामा प्रमुखको निर्णय ‘सर्वेसर्वा’ हुने बताइन् । उनले पनि कतिपय कुरामा आफूलाई जानकारी नै नदिई निर्णय हुनेगरेको गुनासो गरिन् ।
यी केही उदाहरण मात्रै हुन् । कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहमा पुरुष निर्णय हावी रहेको छ । महिलाको नेतृत्व नचाहने र निर्णयसमेत अमान्य हुने मानसिकताले महिलाहरुले सैद्धान्तिक रुपमा अधिकार पाए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती खेप्नुपरेको हो । योजना निर्माण र अनुगमनमा मात्रै होइन न्यायिक समितिलाई समेत पुरुषले नै सञ्चालन गर्न खोजेका थुप्रै उदाहरण छन् ।
‘वडामा ३ जना पुरुष र २ जना महिला सदस्य हुनुहुन्छ । तर योजना निर्माण गर्दासमेत महिला सदस्यसँग समन्वय नगरी पुरुष सदस्यहरुले एकलौटी गर्नुहुन्छ,’ उनले गुनासो सुनाइन् ।
योजना अनुगमन, न्यायिक समिति र योजना तर्जुमाको संयोजक रहने अधिकार उपप्रमुख तथा उपाअध्यक्षलाई भए पनि उनीहरुको निर्णय मान्न भने प्रमुख तथा कर्मचारीहरु समेत तयार नभएको देखिन्छ । कर्णालीमा मात्र नभएर देशैभरका अधिकांश स्थानीय तहमा पुरुष नै प्रमुख छन् । संविधानतः प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एकमा महिला अनिवार्य गरेको छ । तर प्रायः सबै राजनीतिक दलले महिलालाई उपप्रमुखमा मात्र उम्मेदवार बनाएका थिए ।
स्थानीय तहका प्रमुखहरु भने आफूले समन्वय गरेरै काम गरिरहेको बताउँछन् । महिला भएकै कारण उपप्रमुखमाथि आफूले विभेद नगरेको र आफ्नो निर्णय लाद्ने काम नगरेको उनीहरुको भनाइ छ ।
पछिल्लाे - अस्ट्रेलियामा मनाइयो अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली दिवस
अघिल्लाे - विकास र समृद्धिका लागि उद्योग क्षेत्रमा पनि समावेशी लगानी आवश्यक : अर्थमन्त्री